ဆံပင်ညှပ်မယ်စဉ်းစားတိုင်း ဘယ်ပုံစံညှပ်ရမလဲဆိုပြီး ခေါင်းခဲနေလား?
1 Dec 2017 . 2:34 PM
မိန်းကလေးတွေ တော်တော်များများက ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကျပုံစံကို သေချာမသိပဲ သူများလှနေရင် လိုက်ညှပ်ချင်ကြတော့ မတော်တဆလိုက်ညှပ်မိပြီး ပုံဆိုးပန်းဆိုးထွက်လာတာမျိုး ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ခေါင်းအရှုပ်ခံပြီး စဉ်းစားနေစရာမလိုတော့ဘူး။ ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင် ကိုယ့်မျက်နှာနဲ့ စတိုင်ကျပြီး လိုက်ဖက်မယ့် ဆံပင်ပုံစံလေးတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေရဲ့ မျက်နှာအချိုးအစားပုံစံ (၆) မျိုးရှိပါတယ်။
၁။ Oval Shape – ဘဲဥပုံစံမျက်နှာ
ဘဲဥပုံစံမျက်နှာက နဖူးပြင်ကျယ်ပြီး မေးစေ့အထိ သွယ်သွယ်လေး ဆင်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကျပုံစံက Oval Shape ဆိုရင်တော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ယောကျာ်းဆံထောက်ကေကိုမှ ရှေ့ဆံမြိတ် ဆံပင်ပုံစံမျိုး၊ နားရွက်အနားမှာ ဆံပင်ကို ဝဲဝဲလေးညှပ်တာမျိုး၊ ယောက်ကျားဆံထောက်ကေကို ရှေ့ဆံမြိတ်မချပဲ ပုံစံတစ်မျိုး၊ ပခုံးအတင်လောက် ဆံပင်ညှပ်တာမျိုးတို့ ညှပ်ပေးသင့်ပါတယ်။
၂။ Square Shape – လေးထောင့်ကျမျက်နှာ
လေးထောင့်ကျမျက်နှာက နဖူးနဲ့ မေးစေ့က ဘေးကားပြီး နဖူးကနေ မေးစေ့အထိ ပါးစောင်ရိုးက မျဉ်းပြိုင်တူဆင်းနေတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာကျက Square Shape ဆိုရင်တော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ရှေ့ဆံမြိတ်ချတဲ့ ဆံပင်ပုံစံတော်တော်များများနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ဂျပန်ဆံမြိတ်အတိညှပ်တဲ့ ပုံစံလေးတွေနဲ့လည်းလိုက်ဖက်ပါတယ်။
၃။ Diamond Shape – စိန်ပုံစံမျက်နှာ
စိန်ပုံစံမျက်နှာက နဖူးဘေးထောင့်တွေက အနည်းငယ်ခွက်ဝင်နေတတ်ပြီး မေးစေ့က V Shape လိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ Diamond Shape ဆိုရင်တော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဆံမြိတ်ကို အနည်းငယ်ချတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေ ညှပ်သင့်ပါတယ်။ ဆံမြိတ်အချနည်းပြီး ဆံပင်အဖျားပိုင်းကို wave အကြီးနဲ့ ဆံပင်ကောက်တာမျိုး၊ ယောကျာ်းပုံစံ ဆံထောက်ကေကိုမှ ဆံပင်ဖွာဖွာလေးဖြစ်အောင် ပုံသွင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လည်း လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ဆံပင်အပြောင်သိမ်းပြီး စည်းရင်လဲ လှပါတယ်နော်။
၄။ Round shape – မျက်နှာဝိုင်း
မျက်နှာဝိုင်းပုံစံကတော့ သိပ်ပြီးပြောပြစရာတော့ မလိုလောက်ပါဘူး။ လမင်းလိုပုံစံမျိုးလေး ဝိုင်းနေတတ်ရင်တော့ မျက်နှာဝိုင်းပုံစံမျိုးထဲ ပါနေပါတယ်ရှင်။ Round Shape ဆိုရင်တော့ ရှေ့ဆံမြိတ်ကို အရှည်ကြီး သိပ်မချမိဖို့ ပြောပါရစေ။ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဆံပင်အကောက်ပုံစံမျိုးတို့ ဆံပင်အချပုံစံမျိုးတို့ ညှပ်သင့်ပါတယ်နော်။ ဂျပန်မလေးတွေလို ဆံမြိတ်ကို အတိလေးတွေ ညှပ်မယ်ဆိုရင်တော့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။
၅။ Rectangle Shape – ထောင့်မှန်စတုဂံမျက်နှာ
ထောင့်မှန်စတုဂံမျက်နှာက နဖူးနဲ့ မေးစေ့ရဲ့ အရှည်က ထပ်တူကျပြီး မျက်နှာပိုရှည်တတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ Rectangle Shape ဆိုရင်တော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဆံမြိတ်အတိညှပ်တာမျိုးတို့ ဆံပင်အကောက်ပုံစံမျိုးတို့ အစရှိသဖြင့်ညှပ်လို့ရပါတယ်။ ဆံပင်အကောက်ကောက်တဲ့အခါမှာ အတွင်းလိပ်၊ အပြင်လိပ်ရှိတဲ့အတွက် အတွင်းလိပ်ပုံစံမျိုးနဲ့ ဆံပင်ကိုကောက်သင့်ပါတယ်။
၆။ Triangular Shape – တြိဂံပုံစံမျက်နှာ
တြိဂံပုံစံမျက်နှာက နဖူးကျယ်ပြီး မေးစေ့က သိသိသာသာချွန်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။ Triangular Shape ဆိုရင်တော့ ရှေ့ဆံမြိတ်ကို အရှည်ထားပြီး ဘေးခွဲဆံပင်ပုံစံလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ပုံမှာကပြထားသလို အောက်ဆံပင်အနားကို ကုတ်ပြီးပုံသွင်းထားတာမျိုးတို့နဲ့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။ ဆံပင်ရှေ့ဆံမြိတ်ကိုတော့ အတိမညှပ်မိဖို့ပြောပါရစေနော်။ နဖူးပိုကြီးတတ်တာမျိုးဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာပုံစံက အပေါ်မှာပြောပြခဲ့တဲ့ ပုံစံ (၆) မျိုးထဲက ဘယ်ပုံစံထဲမှာပါလဲဆိုတာ မှန်ထဲကြည့်ပြီး ညှပ်လို့ရပြီးထင်တယ်နော်။ ဆံပင်ညှပ်ခါနီးတိုင်း အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ဆံပင်အပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လိုညှပ်ရမလဲဆိုတာ မမေ့နဲ့နော်။ ပျိုမေတို့အားလုံး လှသထက်လှနိုင်ကြပါစေနော်။
ဆံပငျညှပျမယျစဉျးစားတိုငျး ဘယျပုံစံညှပျရမလဲဆိုပွီး ခေါငျးခဲနလေား?
မိနျးကလေးတှေ တျောတျောမြားမြားက ကိုယျ့ရဲ့မကျြနှာကပြုံစံကို သခြောမသိပဲ သူမြားလှနရေငျ လိုကျညှပျခငျြကွတော့ မတျောတဆလိုကျညှပျမိပွီး ပုံဆိုးပနျးဆိုးထှကျလာတာမြိုး ဖွဈတတျကွပါတယျ။ ခေါငျးအရှုပျခံပွီး စဉျးစားနစေရာမလိုတော့ဘူး။ ဒါမြိုးတှမေဖွဈရအောငျ ကိုယျ့မကျြနှာနဲ့ စတိုငျကပြွီး လိုကျဖကျမယျ့ ဆံပငျပုံစံလေးတှကေို ပွောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။
မိနျးကလေးတှရေဲ့ မကျြနှာအခြိုးအစားပုံစံ (၆) မြိုးရှိပါတယျ။
၁။ Oval Shape – ဘဲဥပုံစံမကျြနှာ
ဘဲဥပုံစံမကျြနှာက နဖူးပွငျကယျြပွီး မေးစအေ့ထိ သှယျသှယျလေး ဆငျးသှားတဲ့ပုံစံမြိုးဖွဈပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့မကျြနှာကပြုံစံက Oval Shape ဆိုရငျတော့ ပုံမှာပွထားတဲ့အတိုငျး ယောကျြားဆံထောကျကကေိုမှ ရှဆေံ့မွိတျ ဆံပငျပုံစံမြိုး၊ နားရှကျအနားမှာ ဆံပငျကို ဝဲဝဲလေးညှပျတာမြိုး၊ ယောကျကြားဆံထောကျကကေို ရှဆေံ့မွိတျမခပြဲ ပုံစံတဈမြိုး၊ ပခုံးအတငျလောကျ ဆံပငျညှပျတာမြိုးတို့ ညှပျပေးသငျ့ပါတယျ။
၂။ Square Shape – လေးထောငျ့ကမြကျြနှာ
လေးထောငျ့ကမြကျြနှာက နဖူးနဲ့ မေးစကေ့ ဘေးကားပွီး နဖူးကနေ မေးစအေ့ထိ ပါးစောငျရိုးက မဉျြးပွိုငျတူဆငျးနတေတျတဲ့ပုံစံမြိုးပါ။ ကိုယျ့ရဲ့ မကျြနှာကကြ Square Shape ဆိုရငျတော့ ပုံမှာပွထားတဲ့အတိုငျး ရှဆေံ့မွိတျခတြဲ့ ဆံပငျပုံစံတျောတျောမြားမြားနဲ့ လိုကျဖကျပါတယျ။ ဂပြနျဆံမွိတျအတိညှပျတဲ့ ပုံစံလေးတှနေဲ့လညျးလိုကျဖကျပါတယျ။
၃။ Diamond Shape – စိနျပုံစံမကျြနှာ
စိနျပုံစံမကျြနှာက နဖူးဘေးထောငျ့တှကေ အနညျးငယျခှကျဝငျနတေတျပွီး မေးစကေ့ V Shape လိုမြိုးဖွဈနတေတျတဲ့ပုံစံမြိုးပါ။ Diamond Shape ဆိုရငျတော့ ပုံမှာပွထားတဲ့အတိုငျး ဆံမွိတျကို အနညျးငယျခတြဲ့ပုံစံမြိုးလေးတှေ ညှပျသငျ့ပါတယျ။ ဆံမွိတျအခနြညျးပွီး ဆံပငျအဖြားပိုငျးကို wave အကွီးနဲ့ ဆံပငျကောကျတာမြိုး၊ ယောကျြားပုံစံ ဆံထောကျကကေိုမှ ဆံပငျဖှာဖှာလေးဖွဈအောငျ ပုံသှငျးတဲ့ပုံစံမြိုးတှနေဲ့လညျး လိုကျဖကျပါတယျ။ ဆံပငျအပွောငျသိမျးပွီး စညျးရငျလဲ လှပါတယျနျော။
၄။ Round shape – မကျြနှာဝိုငျး
မကျြနှာဝိုငျးပုံစံကတော့ သိပျပွီးပွောပွစရာတော့ မလိုလောကျပါဘူး။ လမငျးလိုပုံစံမြိုးလေး ဝိုငျးနတေတျရငျတော့ မကျြနှာဝိုငျးပုံစံမြိုးထဲ ပါနပေါတယျရှငျ။ Round Shape ဆိုရငျတော့ ရှဆေံ့မွိတျကို အရှညျကွီး သိပျမခမြိဖို့ ပွောပါရစေ။ ပုံမှာပွထားတဲ့အတိုငျး ဆံပငျအကောကျပုံစံမြိုးတို့ ဆံပငျအခပြုံစံမြိုးတို့ ညှပျသငျ့ပါတယျနျော။ ဂပြနျမလေးတှလေို ဆံမွိတျကို အတိလေးတှေ ညှပျမယျဆိုရငျတော့ လိုကျဖကျပါတယျ။
၅။ Rectangle Shape – ထောငျ့မှနျစတုဂံမကျြနှာ
ထောငျ့မှနျစတုဂံမကျြနှာက နဖူးနဲ့ မေးစရေဲ့ အရှညျက ထပျတူကပြွီး မကျြနှာပိုရှညျတတျတဲ့ပုံစံမြိုးပါ။ Rectangle Shape ဆိုရငျတော့ ပုံမှာပွထားတဲ့အတိုငျး ဆံမွိတျအတိညှပျတာမြိုးတို့ ဆံပငျအကောကျပုံစံမြိုးတို့ အစရှိသဖွငျ့ညှပျလို့ရပါတယျ။ ဆံပငျအကောကျကောကျတဲ့အခါမှာ အတှငျးလိပျ၊ အပွငျလိပျရှိတဲ့အတှကျ အတှငျးလိပျပုံစံမြိုးနဲ့ ဆံပငျကိုကောကျသငျ့ပါတယျ။
၆။ Triangular Shape – တွိဂံပုံစံမကျြနှာ
တွိဂံပုံစံမကျြနှာက နဖူးကယျြပွီး မေးစကေ့ သိသိသာသာခြှနျတဲ့ပုံစံမြိုးပါ။ Triangular Shape ဆိုရငျတော့ ရှဆေံ့မွိတျကို အရှညျထားပွီး ဘေးခှဲဆံပငျပုံစံလေးတှနေဲ့ လိုကျဖကျပါတယျ။ ပုံမှာကပွထားသလို အောကျဆံပငျအနားကို ကုတျပွီးပုံသှငျးထားတာမြိုးတို့နဲ့ လိုကျဖကျပါတယျ။ ဆံပငျရှဆေံ့မွိတျကိုတော့ အတိမညှပျမိဖို့ပွောပါရစနေျော။ နဖူးပိုကွီးတတျတာမြိုးဖွဈစတေတျပါတယျ။
Triangular Shapeဒီလောကျဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့မကျြနှာပုံစံက အပျေါမှာပွောပွခဲ့တဲ့ ပုံစံ (၆) မြိုးထဲက ဘယျပုံစံထဲမှာပါလဲဆိုတာ မှနျထဲကွညျ့ပွီး ညှပျလို့ရပွီးထငျတယျနျော။ ဆံပငျညှပျခါနီးတိုငျး အပျေါမှာပွောခဲ့တဲ့ ကိုယျ့ဆံပငျအပျေါမူတညျပွီး ဘယျလိုညှပျရမလဲဆိုတာ မမနေဲ့နျော။ ပြိုမတေို့အားလုံး လှသထကျလှနိုငျကွပါစနေျော။
by yoelu . 1 month ago
Desktop အစားထိုး ROG Mothership မှာ ဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေပါဝင်နေမလဲ
မနက်ဖြန်ကျင်းပမယ့် Galaxy Unpack Event မှာ Samsung ဘာတွေထုတ်ကြွားဦးမှာလဲ?
Transparent Design နဲ့ တွေ့မြင်ရဦးမယ့် Xiaomi Mi 9
Blu-ray Player တွေထုတ်လုပ်နေမှုကို ရပ်ဆိုင်းပစ်လိုက်တဲ့ Samsung
16″ MacBook Pro အသစ်ကို ဒီနှစ်ထဲမှာ မိတ်ဆက်လာနိုင်တဲ့ Apple